“Waan ku faraxsanahay inaan iska diiday Barcelona” – Xiddiga…
By jojo Last updated Jun 6, 2020
(Paris) 06 Juun 2020. Angel Di Maria ayaa daaha ka qaaday inuu ku faraxsan yahay inuusan ku biirin Barcelona, markii ay isku dayeen inay ka soo iibsadaan Paris Saint-Germain saddex sano ka hor.
Garabka reer Argentine ayaa PSG kaga soo biiray Manchester United sanadkii 2015-kii, laakiin waxaa la la xiriirinayey naadiga reer Spain kaddib markii Neymar uu dhinaca kale ugu dhaqaaqay lacag rikoorka Adduunka ah sanadkii 2017-kii.
Kooxda reer Catalan ayaa soo gabagabeysay saxiixa Ousmane Dembele kaasoo uga yimid Naadiga Borussia Dortmund kaddib markii uu burburay isku daygoodii ay kula soo saxiixan lahaayeen Di Maria, isla markaana Weeraryahankii hore ee Real Madrid uu ku faraxsanaa inay kooxdiisu go’aansatay inaysan iibin.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay Magaalada Paris, laakiin dadka waqtigaas kooxda joogay waxay ii sheegeen waxyaabo qaar, taas oo markii dambe been noqotay,” ayuu u sheegay Di Maria Jariiradda L’Equipe.
“Barca waxay isku dayday inay aniga i timaado, labada kooxood ayaa ka wada hadlay arrintaas, laakiin PSG ma aysan dooneynin inay iga iibiso halkaas ayeyna ku dhammaatay.
“Beentaas aad ayey iiga careysiisay, laakiin ugu dambeyntii inaanan bixin waa wax fiican, sababtoo ah maanta aad ayaan ugu faraxsanahay Paris.” ayuu hadalkiisa ku daray xiddigii hore ee Real Madrid.
32-sano jirkaan ayaa qandaraaskiisu waxa uu dhacayaa sanadka 2021-ka, laakiin wuxuu si maldahan u sheegay inuu heshiiskiisa kordhin doono, isagoo doonaya inuu xirfaddiisa ciyaareed ku gabagabeeyo Kooxda PSG.
“Waxaan doonayaa inaan mustaqbalkeyga ciyaareed ku dhameeyo Yurub oo aan kula midoobo PSG, waa waxa kaliya ee aan doonayo ee maskaxda aan ku hayo” ayuu markale yiri Di Maria.
Di Maria ayaa ku guuleystay afar horyaal oo isku xigta oo Ligue 1 ah, sidoo kale Coupe de France iyo Coupe de la Ligue saddex jeer intii uu joogay Kooxda PSG.
Prev Next 1 of 1,988